अहिले एउटा कलाकारले बनाएको ‘पेन्टिङ’ अनि त्यसको प्रतिकारमा ‘हिन्दु संगठन’ ले कलाकारलाई दिएको धम्की, अनि कलाकारले बनाएको ‘पेन्टिङ’ को पक्ष अनि विपक्षमा बहस भइरहेकोछ । ती बहसहरु हेर्दा मलाई लाग्यो, हामी सबैजना आफ्नो अनुकुल हुने ‘स्वतन्त्रता’को वकालत गरिरहेकाछौँ । यही ब्लगमा पनि मैले ‘आफू अनुकुल स्वतन्त्रताको वकालत’ गरेको तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ । हामीहरु आफूलाई अभिव्यक्त गर्न स्वतन्त्र भएका कारण कलाकारले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, आफूलाई उक्त चित्रहरु मार्फत व्यक्त गरे, आफ्ना बुझाइ चित्रमार्फत देखाउने कोशिस गरे । यो उनको स्वतन्त्रता थियो । चित्रहरुको प्रदर्शनी पछि रुष्ट बनेको एउटा समूहमा ‘स्वतन्त्रता’ जुर्मुरायो, उनीहरुले पनि आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर, कलाकारलाई ज्यान मार्ने धम्कि दिए । एकछिन है, उक्त ‘हिन्दु संगठन’ले “ज्यान मार्ने” कुरा गर्यो, अत: उनीहरुको कुरालाई हामी त्यो संगठनले स्वतन्त्रता उपभोग गर्यो भन्न सक्दैनौँ । कसैलाई ज्यान मार्ने धम्कि दिनु, स्वतन्त्रता होइन, अपराध हो ।
स्वतन्त्रता हो भन्दैमा आफूलाई मनलागेको सबै कुरा गर्न पाइँदैन, मनलागेको सबै ठाउँमा जान पाइँदैन, यो नै यथार्थ हो । यसको सिधा अर्थ भनेको, स्वतन्त्रता सँगै हाम्रा अधिकार र कर्तव्यका कुराहरु पनि जोडिएर आउँछन् । मैले कुनै काम गर्छु भने, उक्त कुराले कुनै धर्म सम्प्रदाय, समूह, जाती, भाषालाई हानी नगरेसम्म, उक्त कुरालाई मैले आफ्नो स्वतन्त्रताको दायरा मान्न सक्छु । भन्ने गरिन्छ, “जहाँबाट मेरो नाक सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईको स्वतन्त्रता सकिन्छ” । जस्तो कि, म मेरो हात तन्काउन स्वतन्त्र छु, तर हात तन्काउने निहुँमा कसैको नाकमा हिर्काउनु, त्यो मेरो स्वतन्त्रता होइन!
यहाँ ‘हिन्दु संगठन’को कुरालाई मैले समर्थन गरेको होइन, किनकी कसैलाई ‘ज्यान मार्ने धम्कि’ दिनु भनेको सरासर अपराध नै हो । र चित्रको विषयलाई लिएर कलाकारलाई धम्की दिनु आपत्तिजनक छ । तर यसो भन्दैमा कलाकारले ठिक गरे भन्ने पक्षमा पनि म छैन । आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने विविध तरिकाहरु छन्, तर कुनै पनि धर्म,जाति,समुदाय विशेषको आस्थामा ठेस लगाउने अधिकार कसैलाई छैन । संसारमा धर्म र जातका कारण नै ठूला युद्दहरु भएको देखिरहेका छौँ, अहिले पनि ‘मोहम्मद’ को विषयमा बनाइएको ‘तल्लोस्तर’को चलचित्रको कारण केही देशहरुमा विरोध प्रदर्शन भइरहेकाछन् केहीले ज्यान पनि गुमाइसके ।
कलाकारले आफ्नो कलालाई ‘फ्युजन’ भनेर परिभाषित गरेकाछन्, उनले जसरी परिभाषित गरे पनि, अनि जुन नियतले बनाइएको भएपनि, उनको कलाले एउटा धर्ममा आस्था राख्नेहरुको उपहास गरेकोछ भन्दा फरक पर्दैन । हामीले बारम्बार सँधै भनिरहेका हुन्छौँ, आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा, अरुलाई हानी हुने काम गर्नु हुँदैन तर यहाँ कलाकारले आफ्नो कला देखाए भन्दैमा, उनको कलालाई “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता”को खोल ओढाएर, यो चित्र बनाउनु सही छ भन्न सक्दिन ।
कुनैपनि समूहको आस्थामा आफ्नो विश्वास अडेको हुन्छ । तपाई धर्म मान्नुहुन्न वा भनौँ तपाई नास्तिक हुनुहुन्छ भन्दैमा अरुको आस्थालाई ठेस पुर्याउने कार्य गर्नु तपाईको स्वतन्त्रता भित्र पर्दैन। तपाई आफूलाई धर्म मान्ने/नमान्ने अधिकार छ तर अरुमाथि तपाईले यी कुराहरु थोपर्न पाउनुहुन्न । “धर्म अफिम हो” भनेर त्यसै भनिएको होइन । हाम्रो संस्कार, हाम्रो धर्मसंस्कृतिसँग जोडिएकोछ, हाम्रो जिवन तिनै आस्थाहरु सँग जोडिएकोछ । भन्ने नै हो भने, न कसैले भगवान देखेको छ, न केही प्रमाण नै छन् । हाम्रा लागि कुनै ढुंगा पुजे देउता हो, नपुजे केही होइन ।
गाइजात्राको निहुँमा एक नायिकको बारेमा एउटा दैनिक पत्रिकाले छापेको ‘कुराहरु’ बारे निकै चर्काचर्की कुरा भए । त्यसलाई पत्रकारको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भनेर मान्न नि सकिन्थ्यो होला, गाइजात्राको दिन त्यसमाथि पनि जोक थियो । तर हामीले नै ती कुराहरुलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भनेर मान्न तयार भएनौँ र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता भनेर मान्न पनि सकिँदैन । उक्त सामाग्रीको बारेमा धेरै दिन सम्म बहस चलिरह्यो, नायिकाले थप्पड नै हिर्काएको सम्म खबर आयो ।
यहाँ पनि त्यही कुरा नै दोहोरिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । जस्तो कि, हिन्दु धर्ममा काली भनेर मान्ने गरेको देवीलाई “सुपर काली” भन्दै “माझि औँलो” देखाएको फोटो बनाइएकोछ । हुन त, न कालीलाई कसैले देखेको छ, न कालीले केही गर्न नै सक्छिन् । कालीको फोटो जस्तो बनाएपनि भयो, सायद पहिले देखि नै कालीको फोटो “सुपरकाली” को शैलीमा बनाइएको भए हामीलाई सही नै लाग्थ्यो, किनकी यो एउटा चलन/संस्कार मात्र हो । यहाँ कालीप्रति आस्था राख्नेहरुका लागि “सुपर काली” सह्य नहुने कुरा भयो ! अत: एउटा समुदायको आस्थामा चोट पुर्याउनुलाई आफ्नो “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता”को उपभोग गरेको भनेर मान्न सकिँदैन ।
म मन्दिर जान्छु, रितिरिवाज पनि मान्छु तर पनि आफूलाई म ‘त्यती धेरै’ धार्मिक छु जस्तो लाग्दैन । मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोध्ने हो भने, उक्त चित्रले मलाई कुनै असर गरेको छैन, तर पनि कता कता त्यस्तो चाँहि नबनाएको भए हुने भन्या जस्तो लाग्छ । धर्म, जात आदि कुराहरु संवेदनशिल कुराहरु हुन् भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । अनि यी कुराहरु संवदेशनशिल छन् भनेर जान्दा जान्दै, त्यही कुरामाथि आक्रमण गरिनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।
स्वतन्त्रताको उपभोग त गरौँ तर स्वतन्त्रताको पनि सिमा हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सौँ । यति कुरा मनन गर्नैपर्छ कि, स्वतन्त्रतासँगै दायित्व पनि जोडिएर आउँछ । आशा गरौँ, कलाकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेले कानुन अनुसार सजाय पाउनेछन् अनि कलाकारले पनि आफ्नो ‘स्वतन्त्रता’को दायरा बुझेर अघि बढ्नेछन् ।
SANGAM RAJ September 15, 2012 at 10:20 AM
I agreed...... Everyone should use his/her freedom without hurting other's sentiment.
Mahesh Malla September 16, 2012 at 12:37 PM
I fully agree with you, because the artist should not have drawn those kinds of photos which may insult and humiliate the feelings of Hindus and those people threatening to kill the artist also shouldn't have threatened like that way. Instead they should have gone throughacampain.